अप्रेशन गरी बच्चा जन्माएका महिलाले ध्यान दिनुपर्ने ५ कुरा | Lifemandu
| बिहीबार, ७ मंसिर, २०७४
एजेन्सी । बच्चा जन्माउँदा गरिने ‘सीजरियन सेक्सन डेलिभरी’ (अप्रेशन गरी बच्चा जन्माउने) लाई लिएर विभिन्न्न भ्रम सुन्न पाइन्छ, । प्रसूती तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा। शितल अग्रवालका अनुसार सीजरियन सेक्सनको भ्रम र वास्तविकता यस्ता छन् :
३.अप्रेशन पछि केही आमाहरुमा तत्काल स्तनपान गराउनु हुँदैन भन्ने मान्यता छ । अप्रेशन लगत्तै वा सोही दिनदेखि स्तनपान गराउँदा कुनै असर पर्दैन।
४.अप्रेशन गरेको भोलिपल्ट अर्ध तरल पौष्टिक भोजन ग्रहण आग्रह गरिन्छ । चिल्लोयुक्त तरल पर्दाथ खानु हुँदैन । तेस्रो दिनदेखि आइरन र फाइबरयुक्त तरल खानेकुरा खान सकिन्छ । ताजा फलफुल, सागसब्जी, खानुपर्छ । डिहाइड्रेसनबाट बच्न पानी वा तरल पदार्थ प्रशस्त खानुपर्छ । सन्तुलित पोषण खानुपर्छ जसले अनावश्यक रुपमा तौल बढ्न दिदैन।
सिँउदोमा सिन्दुर लगाउनु हुन्छ ? गम्भीर असर पुग्ला !
एजेन्सी । विवाहीत महिलाले सिन्दुरको प्रयोग गर्ने गर्छन् । सामान्यता हिन्दूधर्मावलम्बि महिलाले विवाह पश्चात सिन्दुरको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । तर, त्यस्ता सिन्दुर स्वास्थ्यका हिसावले भने हानिकारक पा